अमेरिकामा एकैदिन १९ सयको मृत्यु, कोरोनाबाट धेरै मृत्यु हुने ५ देशहरु ! – Sagarmatha Online News Portal
अमेरिकामा एकैदिन १९ सयको मृत्यु, कोरोनाबाट धेरै मृत्यु हुने ५ देशहरु !
वर्ल्डओमिटर्स इन्फोका अनुसार हालसम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या १६ लाख ३ हजार ७ सय ५१ जना पुगेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म संक्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या ९५ हजार ९ सय ३१ जना पुगेको छ । ३ लाख ५६ हजार ६ सय ६५ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ११ लाख ५१ हजार २ सय ३९ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ४९ हजार १ सय ५८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै ८५ हजार २ सय २१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, भने ७ हजार २ सय ३५ जनाको एकैदिनमा मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि कोरोनाबाट नागरिकको मृत्यु भएको छ । अमेरिकामा १ हजार ९ सय ले गएको २४ घण्टाभित्र ज्यान गुमाएका छन् ।
हालसम्म अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या १६ हजार ६ सय ९१ जना पुगेको छ । संक्रमितको संख्या भने ४ लाख ६८ हजार ४ सय ५६ जना पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै ३३ हजार ५ सय ३६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । २५ हजार ९ सय २८ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ४ लाख २५ हजार ९ सय ४७ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये १० हजार ११ को स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देशको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा फ्रान्स रहेको छ । फ्रान्समा पछिल्लो २४ घण्टाभित्र १ हजार ३ सय ४१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
हालसम्मा फ्रान्समा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख १७ हजार ७ सय ४९ जना पुगेको छ । उनीहरुमध्ये १२ हजार २ सय १० जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै फ्रान्समा ४ हजार ७ सय ९९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । २३ हजार २ सय ६ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ८२ हजार ३ सय ३३ जना उपचाररत छन् । उनीहरमध्ये ७ हजार ६६ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देशको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा बेलायत रहेको छ । बेलायतमा ८ सय ८१ जनाले २४ घण्टाभित्र कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन् ।
हालसम्म बेलायतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ६५ हजार ७७ जना पुगेको छ । उनीहरुमध्ये अहिलेसम्म ७ हजार ९ सय ७८ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै बेलायतमा ४ हजार ३ सय ३४ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । १ सय ३५ जना मात्रै निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ५६ हजार ९ सय ६४ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये १ हजार ५ सय ५९ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देशको सूचीमा चौथो नम्बरमा स्पेन परेको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्र स्पेनमा ६ सय ६५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
हालसम्म स्पेनमा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या १ लाख ५३ हजार २ सय २२ जना पुगेको छ । उनीहरुमध्ये १५ हजार ४ सय ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । स्पेनमा पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै ५ हजार २ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । ५२ हजार १ सय ६५ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ८५ हजार ६ सय १० जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ७ हजार ३ सय ७१ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
ईटाली पछिल्लो २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने देशको पाँचौं नम्बरमा परेको छ । ईटालीमा पछिल्लो समयमा ६ सय १० जनाको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्म ईटालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ४३ हजार ६ सय २६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्रै ईटालीमा ४ हजार २ सय ४ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । ईटाली सबैभन्दा बढि कोरोनाबाट मृत्यु हुने देशको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छ । हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार २ सय ७९ पुगेको छ । २८ हजार ४ सय ७० निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ९६ हजार ८ सय ७७ उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ३ हजार २ सय ७७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।